Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. संविधान संशोधनको विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच फुट ल्याउने चलखेल शुरु – Emountain TV
काठमाडौं, १४ जेठ । लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर राजनीतिक नक्सा जारी गरेसंगै यतिबेला सरकार संविधान संसोधनको गृहकार्यमा जुटिरहेको छ । तर संविधान संसोधनको विषयलाई लिएर फेरी दलहरुबीच फुट ल्याउने चलखेल सुरु भएको छ । लैनचौरको इसारामा यो चलखेल सुरु भई केही नेताहरुको दौडधुप हुन थालेपछि यसको प्रभाव संसद र सांसदमा पनि देखिन थालेको छ । यसबाट आम नागरिकमा फेरी निराशा पैदा भएको छ ।
राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसंगै अहिले सरकारलाई भारतीय अतिक्रमणपछि गुमेका नेपाली भुमि फिर्ता ल्याउनु छ । संविधानको धारा ९ को २ मा निशाना छाप अनुसुचि ३ बमोजिम हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । अहीले उल्लेख गरिएको निशान छापमा लिपुलेग कालापानि र लिम्पीयाधुरा उल्लेख गरिएको छैन । त्यस्तै संविधानको धारा ४ मा यो संविधान जारी हँुदाका बखत उक्त क्षेत्र नेपालको हुनेछ भनि उल्लेख गरिएकोे छ । २०७२ साल असोज ३ मा नेपालको नयाँ संविधान जारी भयो ।
संविधान जारी भएको ५ वर्षमा बल्ल कालापानी, लिपुलेग र लिम्पीयाधुरा समावेश गरी नयाँ राजनितीक नक्सा सार्वजनिक भयो । ढिलै भए पनि यो सराहनीयक काम भनी सबै क्षेत्रबाट सरकारको प्रशंसा गरिएको छ । त्यसकारण गुमेका भुमि फिर्ता ल्याउन संविधानको धारा ९ संगै संविधानको धारा ४ पनि संशोधन हुनु जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेका कतिपय कामहरु आलोचित रहे । विरोधमा विपक्षी र सत्तापक्षबाटै पनि सडकमा आन्दोलन पनि भए । तर भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा राख्न ओली सरकारले चालेको यो कदमलाई ऐतिहासिक कदमको रुपमा आम नेपालीले मुक्त कण्ठले प्रशंशा गरेका छन । यो प्रशंसासंगै नेतृत्वले अब जसरी पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्नेछ । तर अहिले पार्टिभित्र र संसदमै सांसदहरु विच संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर बाधा अडचन सुरु भएको देखिन्छ ।
नेताहरु लैनचौर जाने र आउने क्रम सुरु भएको छ । नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत नै गोप्य रुपमा काठमाडौं आई चलखेल सुरु गरिसेकेका छन् । पूर्व राजदूतलाई भेट्न केही नेताहरु लाज पचाएर होटलमा पुगेका छन् । यही चलखेलको प्रभाव देखिएको छ । संसदमा संविधान संशोधनको लागि दर्ता भएको प्रस्ताव बैठकको कार्यसूचीबाटै हटाइएको छ ।
यो लकडाउनको बेला ति भारतीयहरु नेपाल कसरी आए ? यो अबान्छित चलखेलबाट राष्ट्रिय एकता र स्वाधिनताको विषयमा कतै आँच आउछ कि आम नागरिकमा चिन्ता बढेको छ । यो घृणित चेलखेलका बावजुद भारतको हेपाह र मिचाह प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न र आफनो भुमि फिर्ता गर्न अहिलेको समय उत्तम छ ।
लामो समयदेखि नेता र नेतृत्वबाट आजित बनेका नेपाली जनतामा अहिले केहि आसा पलाएको छ । नेपाली जनता आफनो देशलाई माया गर्दछन । के हिमाल, के पहाड, अनि के तराइ ? पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका आम नेपाली राष्ट्रभक्त छन । राजनितीक दलहरुमा यो समग्र परिवेश याद रहोस की यदि राष्ट्रिय संकल्पमा आँच आउने काम भयो भने अब नेपाली जनताले ति नेता तथा सांसदलाई लेन्डुपको रुपमा हेर्नेछन । र नाङगेझार पार्दै देश निकालासम्म गर्नेछन । जो अहिले लौनचौरको इसारामा भारतीयहरुलाई भेट्न लुकीलुकी होटलहरुमा पुग्ने गरेका छन् । केहीलाई नेपालीहरुले चिनिसकेका छन, केहीलाई चिन्न बाँकी छ ।
बांकीको पनि छिटृै पर्दाफास हुनेछ । ६० वर्षपछि भएको यो कामलाई सफल बनाउन सबै राजनितीक दल एकजुट हुनु अबको पहिलो र निशर्त आवश्यकता हो । किनकी राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वाधिनता भन्दा ठुलो केहि हुन सक्दैन । त्यसैले राष्ट हाँक्ने जिम्मा लिएका राजनितीक दल र तिनका नेतृत्वले नेपाली नागरिकको भावनामा नखेलौ ।
नागरिकको अपेक्षलाई नजर अन्दाज नगरौ । राष्ट्रप्रेम गर्देै राष्ट्रिय भावनाका साथ बाँचौ । आत्मनिर्भर बनौ । कायर भएर बाँच्ने नेपालीको इतिहास छैन । राष्ट्रघाती नेताहरुको अब भविष्य छैन ।